Fikarohana momba ny firaisana Reincarnation Xenoglossy Tantara momba an'i Nawal Daw - Fikarohana Reincarnation
From: Xenoglossy, avy amin'i Ian Stevenson, MD
Vehivavy Arabo, Silamo iray miteny amin'ny fiainana taloha
Nawal Daw dia teraka Libanona tamin'ny Aprily 25, 1960 ho an'ny fianakaviana arabo iray ary silamo. Amin'ny mbola kely dia hiteny amin'ny fiteny tsy fantatry ny ray aman-dreniny izy ary nandà tsy hianatra teny arabo mandra-pahafatiny. Tamin'ny fahazazany, izy dia naniry ny ho tiany Indian sakafo, mozika sy akanjo.
Fony mbola zazavavy izy dia nitondra an'i Nawal tany amin'ny toerana fizahan-tany any Liban. Tao no nahitany ireo olona niditra tao Akanjo indiana dia nihazakazaka tamim-pifaliana izy ireo. Nanomboka niresaka taminy tamin'ny fiteniny i Nawal ary namaly azy tamin'ny fiteniny izy ireo.
Ny olona iray niresahan'i Nawal dia nanao fitafiana sy volombava izay nampifangaroana, nifanaraka tamin'ny Sikh kolontsaina. Raha izany dia io fiteny io angamba Hindi or Punjabi.
Xenoglossy: Tamin'ity tranga ity, Nawal tamin'ny mbola kely dia niteny fiteny izay mbola tsy nianarany tamin'ny fomba mahazatra. Tsy azon'ny fianakaviany arabo ny fiteniny, fa azon'ny mpizahatany teratany indianina any Liban ka nahavaly azy tamin'ny fitenin'izy ireo, izay angamba ny fiteny Indiana Hindi na Punjabi. Raha afaka niresaka tamin'ny mpizaha tany Indiana i Nawal dia mampiseho tranga xenoglossy izany.
Fiovana eo amin'ny firenena, fironana ara-poko sy fivavahana: Tsy afaka niteny tamin'ny fiteny indianina fotsiny i Nawal, fa tiany ny sakafo, mozika ary akanjo Indiana. Raha izany, azo inoana fa i Nawal dia efa ela niainana tany India. Teraka tamin'ny fianakaviana silamo i Nawal, saingy tamin'ny fotoana nahaterahany Indiana taloha, dia mety ho Hindou na Sikh ihany izy. Arak'izany, ny maha-firenena, ny firazanana ary ny fivavahana dia niova hatrizay.